Maxkamadaha Iswiidhan oo ka soo horjeeda xeer ay yeeshaan laamaha socdaalka ee Midowga Yurub | Somaliska
Maxkamadaha Iswiidhan oo ka soo horjeeda xeer ay yeeshaan laamaha socdaalka ee Midowga Yurub
Midowga Yurub gudigiisa komishinka ee xagga magangalyada iyo socdaalka u qaabilsan ayaa doonaya in bah wadaagtu yeelato xeer ka wada dhaxeeya.
Hase ahaatee maxkamahada socdaalka dalkaan ayaa taas diidmo kala hor yimid. Waxaana ay maxkamaduhu u arkaan in lagala wareegayo awooda iyo go’aamadeeda oo la hoos geeynayo gudiga komishin-ka Midowga Yurub, sidaas waxaa tilmaantay iyadoo u warameeysay idaacadda wararka Iswiidhan u faafisa ee Ekot Ulrika Geijer oo ah garsoore maxkamada socdaalka ku taala magaaladda Malmö ee caasimadda seddexaad ee dalkaan Iswiidhan.
Hindisahan Midowga Yurub ayaa mid lugu doodayo in si deg deg ah lugu celiyo magangeliyo doonka soo mara wadan amni iyo amaan leh,iyadoo aan la eegin sababata qofka xaquuqdiisa qaxootinimo, saa daraadeedna ay maxkamadaha Iswiidhan halkaas ku waayaan awoodooda go’aameed. Ulrika Geijer, ayaa sidoo kale sheegtay in haddii xeerkaasi la hirgalyo eeysan muuqan sabab loo hareer maro ee ay tahay oo keliya in lugu dhaqmo.
Nidaamka u degsan maxkamadaha socdaalka daalkan ayaa waxaa ka mid ah in ay dib eegis ku sameeyso kiis kasta oo la horkeeno, balse xeerka Midowga Yurub doonayo ayaa ah mid ka hor imanaya kuwa Iswiidhan. Haddii hindisahan Midowga Yurub la isku af garto ayaa sharciga Iswiidhan bixiso uu noqonayaa mid ku meel ah. Ulrika Geijer-na waxaa ay farta ku fiiqday in xeerkaasi noqon doono mid wax u dhima xaquuqda qofka ee u leeyahay magangalyo iyo in kiiskiisa dib u eegis lugu sameeyo.
Iswiidhan inkastoo ay xubin ka tahay dal ka mid ah dalalka Midowga Yurub, hadana waxaa dhawaan la soo saaray sharci adag oo gebi ahaanba xakameeynaya magangalyo doonka dalkaan soo galayey mudooyinkii ugu dambeeyey. Iswiidhan waxaa ay ka mid tahay dalal ay soo gaareen qaxooti faro badan oo intooda badan ka soo cararay dagaaladda ka socda qeybo ka mid ah bariga dhexe sida Suuriya.
Dood kulul oo ka dhacday baarlamaanka